မမေ့ကြပါနဲ့ | ပြည့်စုံ
မမေ့ပါဘူး.... မေ့စရာ မှမဟုတ်တာ... ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး
rose ပြောသလိုပါပဲ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး
မေ့လိုက်စရာ မဟုတ်ဘူး။ မေ့မှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ မမေ့ပါနဲ့လို့ သတိပေးတာ ကျေးဇူး
လုံးဝ လုံးဝ မမေ့ဘူး...
ပေရွက်မတင်၊စာမတင်ပဲ သူတို့ ကတဖြည်း
ပါဘူး။တကယ်ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ ပုံပြင်တွေကနေတကယ်
ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ တကယ့် အဖြစ်တွေပါပဲဆိုတာအမြဲ
မေ့ဖို့ရန်လည်း ခက်ပါတယ်လေ... ကျေးဇူးနော်... မမေ့ဖို့ သတိပေးလို့...
တဖက်သတ်ပဲ ရလိုက်ရတဲ့ အမုန်းတွေ
Ur fri said...
R U forgot me. but i don't. We are friends in nu po
& Other friend